Ezona zinwele zinde zibalaseleyo emadodeni, ukhetha eyiphi? | Amadoda aQinisekileyo
Izinwele ezinde zamadoda
UPaco Maria Garcia | | Isitayile esinenwele
Amadoda ngokuhamba kwexesha akwazile ukubaleka iinwele ezimdaka ezithandekayo; Bafumanise kwiinwele zabo enye indlela yokuziva bekhululekile kwaye behendeka.
Izinwele ezinde zazuza amandla ngokuhamba kwexesha kwaye bayitshintshile indlela yokucheba iinwele zamadoda. Uninzi lweengcali kuye kwafuneka bahlaziye isimbo sabo kunye nezisombululo kunqunyulwa ukugcina abathengi.
Imifanekiso yamadoda aneenwele ezinde soloko ume ngaphandle kwesihlwele. Iigallants, isibindi, ubukrelekrele, isibindi, ulutsha kunye nokunye okuninzi unokunxiba iinwele ezilahlekisayo; inyani kukuba ngandlela thile babambe umdla wabo bonke abantu ababangqongileyo.
Kuyimfuneko ukuba abo banobuganga bokujoyina le fashoni intsha, bayithathe ngokungathí sina. Mhlawumbi akusafuneki ukuba batyelele iinwele ukugcina ukusikwa, kodwa kufuneka bathathe olunye unonophelo ukubonisa iinwele ezikhazimlayo nezisempilweni. Kwaye olu lonyango olufumanekayo ekhaya okanye ngabaqeqeshiweyo. Nokuba yeyiphi na indlela ekhethiweyo, into ebalulekileyo kukugcina.
Kwi-2018 imeko yeenwele zamadoda zinde kunye neenwele eziphakathi. Kukho ixesha lokukhula xa isitayile sinzima, kodwa kunjalo umba wobukrelekrele kunye nexesha. Kancinci kancinci kuya kubakho ukufumana okona kulungileyo kokusikwa kwale mihla.
1 Iindidi zeenwele ezinde
1.1 Ukunqunyulwa kwasendle
1.2 Inkundla yesurf
1.3 Mun Iinwele
1.4 Umane ophakathi
2 Abadumileyo abaqhelekileyo abaneenwele ezinde
3 Iingcebiso ezinde zokukhathalela iinwele emadodeni
4 I-Hipster Sika: Iinwele ezinde zoNyaka
Iindidi zeenwele ezinde
Nguye ekhethwe ngamadoda afuna ukuvela ngokungakhathali. Kuyabonakala ukuba, abanikeli xesha lokwenza iinwele, kodwa eneneni bachitha ixesha elininzi kunokuba becinga ukuba bajongeka ngoluhlobo. Ukuba iinwele zichanekile okanye zilungile, kuyacetyiswa ukuba wenze ukoyikeka ekugqibeleni.
Kumadoda anamagagasi, olu hlobo lweenwele lusebenza kakhulu kwaye kulula ukunxiba. Abaqengqeleki banika ngokuchanekileyo ivolumu oyifunayo kunye nembonakalo yasendle.
Ukuba indoda inobuso obuthathaka, khapha esi sitayile kunye nentshebe yosuku Imnika ubudoda.
Ukukhanya, iinwele ezi-wavy lukhetho olufanelekileyo. Abanye banxiba umbala wendalo ohlanjwe lilanga, abanye banokujika kwi-stylist ukuqaqambisa amanqaku athile. Yi isitayile sendalo kakhulu enobude obungalinganiyo emacaleni; Kuxhomekeka umsitho, inokunxitywa ikhululekile okanye ibotshelelwe.
Kubalulekile musa ukuphawula imivumbo, kodwa ukuyiphosa kumacala ahlukeneyo ngokokukhula. Nokuba iqela elithile lisesikweni ebusuku ungasebenzisa ijeli ukulungisa.
Sisitayile esibonisa amadoda aneenwele ezinde kakhulu, ukuba nje zineenwele ezilumkileyo ukuze zingaweli kwiimvakalelo zokuphazamiseka. Yinwele leyo ibonakala ngokulula kunye nobuhle. Ukusuka kwihashe lokugqibela lokudlula lishiyekile ngaphandle kokucinezela; iziphumo ibun okanye umsila ophindwe kabini.
Le ndlela isetyenziswa ngokubanzi ngabafazi namhlanje. Ngokwesiqhelo ikhethwe ukuba ibelula kwaye inyamekele iinwele ezinazo; Kusebenza bobabini ukuya emsebenzini imini nobusuku, kunye nepati ebusuku.
Iinkcukacha emadodeni ungashiyi umphambili ungqindilili. Endaweni yoko, kufuneka ikhululeke, ngaphandle kokuwa ebusweni.
Iingcali ezinkulu zefashoni zichaza le nwele inde njengeyona nto iyiyo 2018. Iimbonakalo ezahlukeneyo zinokwenziwa kwaye ukujongwa kwabasetyhini kuqinisekisiwe.
Ubude boku kusikwa ziisentimitha ezimbalwa ngaphezulu kwegxalaba. Izitayile ezinokufezekiswa zahlukile kuxhomekeke kwindlela okhetha ukuyibumba ngayo. Inokunqunyulwa ngokuthe ngqo okanye kwisikali, nangona enye indlela enokunkqonkqoza ngayo, phakathi okanye ngasemva.
Abadumileyo abaqhelekileyo abaneenwele ezinde
NguJohnny Enzulu: ngobukho bayo obuyimfihlakalo kwaye bekhululekile Ubeka iinwele ezinde njengophawu lomntu. Amaza alo ayinika ivolumu efanelekileyo ukuze ibonakale imdaka kwaye icocekile ngaxeshanye.
UChris Hemsworth: lo mdlali unqumle amanyathelo afanelekileyo kulawo madoda aneenwele ezithe nkqo. Isitayile siyakuvumela fumana intshukumo kunye nokuqaqambisa imbonakalo yobuso.
Umgxobhozo kaBrad: Ibiyi omnye wabanduleli beenwele ezinde phakathi kwezidumileyo. Ukwahlula phakathi, kugxininisa isiphumo ngokukhanyisa amanqaku athile; Uye wabonwa kunye ne-bangs esecaleni kweminye imicimbi.
Ikhithi yeHarington: ngee curls zakhe uyaphumelela Iziphumo ezipholileyo nezingaqhelekanga. Kodwa eneneni uchitha ixesha lakhe edibanisa kwakhona; eneneni, sebenzisa iimveliso ezizodwa ukugcina iinwele.
Iingcebiso ezinde zokukhathalela iinwele emadodeni
Ukunxiba iinwele ezinde ezinesitayile, ezinye iingcebiso zinokulandelwa:
Khetha ngononophelo iimveliso zokuhlamba, ngohlobo lweenwele.
Musa ukulibala bathenge izixhobo zokupholisa ukuququzelela isitayile.
Izomisi azisetyenziselwa yonke imihla kuba bamenzakalisile. Kuya kufuneka unikezele ixesha kula mathuba.
Nangona bengadingi ukutyelelwa iinwele kangangexesha elide, kufanelekile chukumisa iingcebiso. Ke iinwele zingakhula zisempilweni kwaye zomelele.
Abo banengxaki yokulahleka kweenwele kufuneka Sebenzisa iimveliso ukomeleza.
Musa ukusebenzisa kakubi ukusetyenziswa kwejeli. Ukuba kunokwenzeka yisebenzise kuphela kwiminyhadala ekhethekileyo.
Yakha umkhwa wokuxubha imane ngobusuku ngabunye. Oku kuthintela amaqhina adinayo kwaye kunika ukukhanya okufunwayo.
I-Hipster Sika: Iinwele ezinde zoNyaka
Ngo-2018, unyaka onyuliweyo wamadoda afuna ukugqama ngu "Imivundla"; kuhle kuba zilungelelanisa naluphi na uhlobo lweenwele ngokulula. Kuya kufuneka bavunyelwe ukuba bakhule ngezantsi kwamagxa kwaye emva koko iinwele ziya kwahluka.
Ukugqibezela oku kujongeka, madoda Kufuneka bashiye iindevu zingqindilili ngangokunokwenzeka. Umnxeba wokugqibela kukukama zombini ngaphambi kokuphuma; isiphumo kukujonga ngenkalipho, kwendoda kunye nokuvukela; Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba iinwele akufuneki zibonakale zingcolile okanye zingcolile.
Ngale nwele inde Unokuphuma ngeenwele zakho yonke imihla. Kwakhona lukhetho olukhulu lokudibanisa ihashe lomsila elinesiqingatha elinemikhonto esecaleni evulekileyo yokuphuma emva kwemini; kwaye kumnyhadala wangokuhlwa ungaphosa yonke into umva kunye nemveliso ethile.
Amadoda anobuso obunxantathu ayathandwa kakhulu xa usika oku. Ulwaleko kwaye izidlele zakhe zifihle amabala ebusweni. Nangona kunjalo, le ndlela inokudityaniswa naye nabani na, wonke umntu angayisebenzisa ukuba uziva ekhululekile kwaye ezithembile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Izinwele ezinde zamadoda
Shea ibhotolo ngobuhle